Telefoonada ugu fiican ee Android: tijaabooyinka, bilaabista, xanta ... | Androidsis (Bogga 22)
Huawei Nova 3e: Nooca cusub ee bartamaha
Huawei Nova 3e: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista. Ka ogow wax dheeraad ah oo ku saabsan bartamaha dhexe ee noocyada Shiinaha ee horay loogu soo bandhigay waddankaaga.
HTC Desire 12 iyo Desire 12+: Noocyada cusub ee Telefoonada Mid-Range ah
HTC Desire 12 iyo Desire 12+: Tilmaamaha, Qiimaha, iyo Daahfurka. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan dhexda-dhexaad ee cusub ee astaanta Taiwan oo si rasmi ah loo shaaciyey
Waxaan kuu soo bandhigeynaa Lenovo K5 iyo K5 Plus, oo ah labo terminaal oo ku soo biiray tartanka bartamaha sanadkaan iyadoo la sifeynayo astaamo aad u wanaagsan iyo astaamo aad u deeqsi ah marka loo eego qiimahooda. Baro iyaga!
BQ waxay kalabar shaqaalaheeda dayactirka ku sameysaa ERE. Raadi wax badan oo ku saabsan sababaha shirkadda Isbaanishka loogu qasbay inay yareyso shaqaalaheeda.
Lenovo S5: Nooca dhexe ee cusub ee nooca Shiinaha
Lenovo S5: Qeexitaannada, Qiimaha, iyo Daahfurka waa la xaqiijiyay. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah shirkadda Shiinaha ee horay loo soo bandhigay.
Qiimaha wax soo saarka ee Galaxy S9 + wuxuu aad ugu egyahay kan iPhone X
Qiimaha wax soo saarka ee Galaxy S9 + waa 10 euro oo ka jaban kan iPhone X iyo 10 euro oo ka qaalisan Galaxy Note 9, inkasta oo ay ku kala duwan yihiin qiimaha ugu dambeeya.
OPPO R15: Calaamadda sumadda cusub
OPPO R15: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabida ayaa la xaqiijiyay. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub nooca Shiinaha ee la bilaabi doono Abriil.
Samsung ayaa ka saari doonta tifaftiraha fiidiyowga iyada oo la bilaabayo Android P
Nooca xiga ee Android, Android P, wuxuu horseedi doonaa in meesha laga saaro codsigii Samsung, Movie Maker
OUKITEL WP5000: Qeexitaannada Buuxa ee Telefoonka Cusub ee Biyo-la’aanta ah
OUKITEL WP5000: Qeexitaannada Rasmiga ah ayaa La Xaqiijiyay. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ka raadi sumadda Shiinaha ee u taagan caabbinta biyaha. Waxaa dhawaan laga bilaabi doonaa suuqa.
Shaandhaynaya sawirro cusub oo ah Xiaomi Mi Mix 2S
Muujiyay naqshadda 'Xiaomi Mi Mix 2S' ee sawirro cusub. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee dhamaadka sare ee nooca Shiinaha ee sida ugu dhaqsaha badan loo bilaabi doono oo aan horeba u ogaanay qaabkiisa dhabta ah.
iLA Silk, mobiil qaali ah oo qeexitaan caymis leh
La kulan 'ILA Silk', 'mobilada' oo ku yimaada bandhig qiimo leh sababtoo ah naqshadeynta iyo aluminium dhalaalaya oo dhabarka ku yaal, iyo dhinacyo yar oo dhinac ah oo taageera shaashadeeda 5.7-inji Telefoonkani wuxuu la socdaa SD430 SoC, 4GB oo RAM ah, iyo 64GB oo ah xusuusta gudaha ah.
Sifeeyay qiimaha Huawei P20 iyo Huawei P20 Pro
Qiimaha Huawei P20 iyo Huawei P20 Pro ayaa la shaaciyey. Wax badan ka ogow qiimaha la helay ee loogu talagalay taleefannada dhamaadka sare ee sumadda Shiinaha.
Xiisaha xiisaha leh ee ku saabsan Xiaomi oo aad u badan tahay inaadan aqoon
Waxyaabaha xiisaha leh ee 4 ee ku saabsan Xiaomi oo xaqiiqdii aadan ogeyn. Soo ogow waxyaabahaan xiisaha leh ee ku saabsan sumcadda caanka ah ee Shiinaha oo sida xaqiiqda ah wax aan adiga kuu muuqaneyn.
Huawei wuxuu isbarbardhigayaa kamaradda P20 iyo DSLR ee xayeysiisyada xayeysiinta hore
Shirkadda Aasiya ee Huawei ayaa bilowday inay afka ka sameyso laba ogeysiis oo cusub oo P20 la barbar dhigo kamarad dhaqameedka DSLR.
Blackshark, oo ah mid ku habboon moobiilka Xiaomi ee loogu talagalay cayaartoyda, ayaa ku sii deynaya Geekbench
Xiaomi Blackshark, oo ah terminaal loogu talagalay cayaartoyda, kaas oo ku yimaada qalab Qualcomm SD845 SoC iyo 8GB oo xasuusta RAM ah, ayaa lagu sifeeyay Geekbench, oo ah jaangooyo ku raaxeysata sumcad wanaagsan iyo rikoodh raad raac ah oo aan ku kalsoonaan karno illaa iyo inta aan weligeen xumaan nagama tegin. Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta!
Huawei P20 Lite horeyba waxaa loogu iibiyaa Talyaaniga lacag dhan 369.90 euro waana kuwan qeexitaankiisa
Huawei P20 Lite ayaa horeyba loogu heli karaa iibinta Talyaaniga qiimo aan yareyn oo ah 369 euro, sidoo kale waxaa lagu iibinayaa gudaha Poland qiyaastii 380 euro isweydaarsiga. Terminal-kan ayaa ku qalabaysan dhowr ka mid ah kuwa aan soo sheegnay, sida wargelinta. Soo ogow!
Tilmaamaha buuxa ee Vivo V9 ayaa ka muuqda goobta rasmiga ah ka hor intaan la bilaabin
Vivo V9 ayaa la dusiyay iyadoo ay la socdaan dhammaan xogteeda ku jirta bogga rasmiga ah ee shirkadda. Astaamaha aan ku tilmaami karno inta ugu badan ee bartan-dhexaadkan xoogga badan, waxaan ka helnaa processor Qualcomm SD626, shaashad ballaaran oo 6.3-inji ah, iyo astaamo kale. Soo ogow!
Jaakada headphone haa, saxanka headphone maya ee OnePlus
Maqnaanshaha daacadda dhagaha ayaa umuuqata inay dhibaato ku tahay isticmaaleyaal fara badan, ugu yaraan taasi waa tii ugu dambeysay ee sahanka CEO OnePlus uu muujinayo.
10ka Taleefanada ugu awoodda badan Febraayo 2018, Sida laga soo xigtay AnTuTu Benchmark
AnTuTu waxay noo keenaysaa liistada boosteejooyinka ugu awooda badan suuqa bilba bil, taas oo, munaasabadan awgeed, aan ku ogaan karno maqnaanshaha Google Pixel 2, Samsung Galaxy S8, iyo aalado kale oo aan u maleyno inay ka muuqan doonaan darajadan laakiin taasi may ahayn kiiska. Waan kuu balaarinay!
Sifeeyay qiimaha Xiaomi Redmi Note 5 Pro ee Yurub
Wuxuu shaaca ka qaaday qiimaha la sheegay ee Xiaomi Redmi Note 5 Pro ee Yurub. La soco wax badan oo ku saabsan qiimaha taleefanka sumadda Shiinaha uu yeelan doono markii uu ka bilowdo Yurub.
Waxaan kuu soo bandhigeynaa Huawei Nova 2 Lite, oo ah midka dhexe ee cusub oo leh aqoonsi wajiga ah
Huawei hadda waxay soo bandhigtay Nova 2, oo ah taleefan leh tilmaamo iyo astaamo u qalma moobiil dhexdhexaad ah oo Android ah. Qalabkan ayaa lagu soo bandhigay Filibiin, oo ah meel ay dooratay shirkadda Aasiya oo aqbal badan ka heshay suuqa muddo dheer. Waan kuu soo bandhigeynaa!
Ka dusay naqshadeynta iyo xogta cusub ee ku saabsan LG G7
LG G7: Wuxuu xaday naqshada iyo qaar ka mid ah qeexitaankiisa. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefanka sare ee sumadda ee la filayo inuu dhowaan suuqa soo galo.
Nokia 9 wuxuu ku dari karaa shaashad dareeme iyo shaashad shaashadda shaashadda hoosteeda
Nokia 9 wuxuu yeelan karaa shucuur iyo aaladda sawirka shaashadda shaashadda. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan laba ka mid ah astaamaha taleefanka ugu sarreeya dhammaadka la filayo inuu ku daro.
Sawirro sifeysan oo ah noocyada Huawei P20 iyo midabbo
Huawei P20, P20 Pro iyo P20 Lite: La kulan naqshadooda. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan naqshadeynta iyo midabada ay taleefannada cusub ee sare ee Huawei ay suuqa ku dhufan doonaan.
La kulan Sharafta 7C, Huawei ee bartamaha-cusub
Huawei waxay soo bandhigtay 'Honor 7C', oo ah meel dhexe oo soo socota oo ku qalabaysan 5.99-inch HD + shaashad qaab 18: 9 ah, sideed-geesood ah Qualcomm Snapdragon 450 SoC, iyo laba nooc: A 3GB oo RAM ah oo leh 32GB ee ROM, iyo 4 / 64GB kale. Ogow dhammaan qeexitaankiisa!
Xiaomi Mi 7 sidoo kale wuxuu la imaan lahaa darajo sida ku xusan qalabkiisa
Xiaomi Mi 7 wuxuu la imaan doonaa shaashad shaashaddiisa ah sida Mi Mix 2S oo kale, tanina waxaa ugu wacan dhowr fayl oo feylal ah oo muujinaya in qalabkani uu la imaan doono darajo iyo aqoonsi wajiga 3D ah, marka lagu daro inuu xaqiijinayo dhowr kale oo dheeri ah faahfaahinta. Waan kuu balaarinay!
Huawei Y9 2018: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah nooca Shiinaha. Waxaa si rasmi ah loo soo bandhigay oo sidoo kale laga bilaabay Thailand.
Waraaqaha Huawei P20 ayaa la sifeeyay kahor soo bandhigiddooda
Saddex toddobaad ka hor soo bandhigga rasmiga ah ee Huawei P20 iyo noocyadiisa kala duwan, kan rasmiga ah ee adduunka Android, Ewan Blass ayaa hadda ku shaandheeyay waraaqaha xallintooda asalka ah.
Motorola waxay xaqiijineysaa inay jiri doonaan moodooyin cusub oo kujira Moto Z
Motorola ayaa soo bandhigi doonta moodooyin cusub oo ku kala jira Moto Z. Dhowr maalmood oo xanta ah ka dib, sumadda ayaa xaqiijineysa inay jiri doonaan taleefano cusub oo ku dhex jira aagga.
Huawei P20 wuxuu yeelan doonaa nooca Porsche Design
Huawei P20 Porsche Design: Nooca cusub ee gaarka ah ee taleefanka. Wax badan ka ogow taleefankan xaddidan ee xaddidan oo qiimihiisu ka badnaan doono midka Galaxy S9 ama iPhone X ee suuqa.
Dib u eegista Xiaomi Mi6
Dib u eegis buuxda ee Xiaomi Mi6. Dib-u-eegis fiidiyow oo dhammaystiran oo ka badan 49 daqiiqo oo muuqaallo ah oo aan kuu sheegayaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad go'aan uga gaarto iibsashada mid ka mid ah boosteejooyinkan asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha.
Heshiisyadii ugu fiicnaa eBay SuperWeekend
eBay waxay noo diyaarisay dalabyo dhowr ah SuperWeekend-kan, markanna, waxaan dib u eegi doonnaa gorgortanka ugu wanaagsan ee aad ku heli karto midkood oo aan ku xallinno dhammaadka usbuuca kan ugu fiican ee eBay ay noo hayso. Halkan waxaad ka heli doontaa qiimo dhimis dhowr ah oo aad ka heli karto mid ka mid ah taleefannada gacanta iyo kiniiniyadaan. Soo ogow!
Xiaomi ayaa dukaankeeda cusub ka furi doonta magaalada Madrid bisha Maarso 17deeda
Xiaomi ayaa dukaankeeda cusub ka furi doonta magaalada Madrid bisha Maarso 17deeda. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan furitaanka dukaanka saddexaad ee sumcadda Shiinaha ee magaalada Madrid oo la qaban doono usbuuca soo socda. Nooca Shiinaha ayaa si adag ugu heellan suuqa Isbaanishka
Xiaomi Mi Mix 2S wuxuu ku yeelan doonaa darajo geeska kore ee midig sida ku xusan fiidiyowgaan
Xiaomi Mi Mix 2S ayaa la imaan doonta qaanad sare ee midigta sare sida ku cad xoqitaankii ugu dambeeyay. Tan waxaa dhawaan lagu xaqiijiyay fiidiyow aan ku aragno isticmaale isticmaalaya. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale qiimeyn karnaa dheecaanka iyo waxqabadka. Soo ogow!
OnePlus 6 wuxuu sifiican uga fiicnaanayaa kuwa kula tartamaya jaangooyooyinka
Natiijooyinka halbeegga ah ee OnePlus 6 ayaa ka fiicnaaday kuwa ay xafiiltamaan. Raadi wax badan oo ku saabsan dhibcaha taleefanku ka helay imtixaanadan.
Shirkadda Huawei waxay u adeegsan doontaa sirdoonka macmalka ah qaybtiisa hoose-dhexe
Huawei waxay u keentaa sirdoon macmal ah qaybta hoose ee hoose. Raadi wax badan oo ku saabsan qorshayaasha shirkadda iyo sida ay u doonayaan inay u adeegsadaan.
Nokia waxay ku biiraysaa barnaamijka lagu taliyay ee Android Enterprise
Nokia waxay ka mid noqotaa Shirkadaha lagu taliyay ee Android. Ka ogow wax badan oo ku saabsan soo gelitaanka sumadda ee shirkadda caddeynta ganacsiga ee taleefannada.
Xiaomi wuxuu xaqiijinayaa soo saarista Xiaomi Mi MIX 2S ee bisha Maarso 27
Xiaomi Mi MIX 2S waxaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa 27-ka Maarso. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan daahfurka iyo soo bandhigida taleefanka cusub ee sumadda Shiinaha
Soo deji sawirada gaarka ah ee Xperia XZ2
Maqaalkan waxaan ku tusineynaa sawir-gacmeedka cusub ee Sony Xperia XZ2, xallintooda asalka ah
Huawei P20 Lite wuxuu yimid TENAA wuxuuna na siinayaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qeexitaankiisa
Huawei P20 Lite waxaa lagu daadiyay jaangooyaha iyo caddeeyaha TENAA goor dhow, isagoo kashifaya dhowr astaamo iyo qeexitaanno horey loo sii daayay. Waxaan ku siinaynaa faahfaahinta!
Nomu M6, mobiil aad u adkeysi badan oo leh qaab iyo naqshad aan la qiyaasi karin
La kulan Nomu M6, oo ah taleefan casri ah oo aad u adkaysi badan oo leh faa'iidooyin dhowr ah oo noo oggolaan doona inaan sii wadno maalin deggan maalinba maalinta ka dambeysa iyada oo aan loo sadqeynin dhammaan astaamaha taleefanka casriga ahi u baahan yahay si loo fududeeyo hawl maalmeedkeena.
Sawirka xayeysiinta ee taxanaha 'Huawei P20' wuxuu muujinayaa kamarad gadaal saddex-laab ah iyo goyn hore
Muuqaal cusub oo xayaysiis ah oo ka kooban taxanaha 'Huawei P20' ayaa muujinaya isku dubaridka saddex kamaradood oo gadaal ah.
Alcatel 3C ayaa hadda laga heli karaa Spain
Alcatel 3C: Nooca gelitaanka cusub ee laga heli karo Spain. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee Alcatel oo hadda laga heli karo waddankeenna.
Meizu E3 taariikhda soo bandhigida waa la xaqiijiyay
Meizu E3: Tilmaamaha iyo taariikhda soo bandhigida. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub nooca Shiinaha ee la bilaabi doono dhammaadka bishan.
Sharafta 7C ayaa la soo bandhigi doonaa tan soo socota ee Maarso 12
Huawei Honor 7C waxaa soo bandhigi doona bishaan Maarso 12 shirkadda Shiinaha. Tan waxaa la ogeysiiyey mahadsanid daadin dhaweyd oo aan ku arki karno cabirka shaashadda iyo taariikhda la soo bandhigayo oo aynaan aad uga fogeyn, laakiin ay naga xigto shan maalmood oo keliya. Soo ogow!
Huawei sidoo kale waxay rabtaa inay yeelato kaaliye u gaar ah
Sida laga soo xigtay Bloomberg, shirkadda isgaarsiinta ee Huawei waxay ka shaqeyneysaa kaaliye u gaar ah, kaaliye ay ka bilaabi doonto oo kaliya dhulka Shiinaha.
LG X4: Nooca noocyadiisa kala duwan ee heer-gelitaan cusub
LG X4: Qeexitaannada noocyada heerka gelitaanka cusub. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee sumcadda ee horay looga bilaabay Koonfurta Kuuriya.
Noocyada kala duwan ee 'Oppo R15' iyo 'R15 Dream Mirror Edition' ayaa si qarsoodi ah loo soo daadiyay iyadoo loo mahadcelinayo TENAA
Qeexitaannada iyo astaamaha Oppo R15 iyo Oppo R15 Dream Mirror Edition, oo ah laba xubnood oo ka tirsan qaybta dhexe ee dhexda, ayaa goor dhawayd la faafiyey, kuwaas oo dhowr qeexitaanno iyo astaamo la dusiyay iyadoo ay ugu wacan tahay TENAA. Waxaan kuu fidineynaa warka!
Waxay kashifeen qeexitaanada Moto E5 cusub
Moto E5: Noocyada cusub ee bartamaha-dhexe ee Motorola. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan noocyada cusub ee dhexdhexaadka ah oo leh saddex taleefan.
Noocyada HTC Imagine ayaa shaaca laga qaaday
Qeexitaannada xaday ee cusub ee HTC Imagine. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ee ugu sarreeya ee la bilaabi doono Abriil.
Xiaomi Mi 6 iyo Xiaomi Mi MIX 2 waxay dhawaan heli doonaan aqoonsi wajiga ah
Aqoonsiga wajiga wuxuu u yimaadaa Xiaomi Mi 6 iyo Xiaomi Mi MIX 2. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan shaqada cusub ee timaada labada taleefan ee nooca Shiinaha.
Xiaomi ayaa soo saari doonta taleefan casri ah oo wata Android Go bishaan
Taleefankii ugu horreeyay ee Xiaomi ee leh Android Go wuxuu imaan doonaa bisha Maarso. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qorshayaasha shirkadda ee ay ku soo saarayso taleefankeedii ugu horreeyay qaybtan nidaamka qalliinka ah.
HTC U12 taariikhda la siidaayo, qiimaha iyo mucjisooyinka xaday
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta xaday ee HTC U12
Meizu M6S oo wata 4 iyo 6GB oo RAM ah wuxuu shahaadada ku helay TENAA
Shirkadda Shiinaha ee Meizu ayaa hadda xaqiijisay Meizu M6S oo leh 4 iyo 6GB oo RAM ah oo TENAA ah. Tani waxay dhacday goor dhow, sidaa darteed, waxaan ku arki doonnaa iyaga liistada soo-saaraha si dhakhso leh, laakiin leh astaamo isku mid ah iyo qeexitaanno 6GB RAM M3S ah oo la bilaabay bishii Janaayo ee sannadkan.
Markii la bilaabay naqshadeynta cusub, Sony waxay daabacday fiidiyow cusub oo aan ku arki karno isbeddelka noocyada kala duwan ee Xperia tan iyo markii uu suuqa yimid.
Qeexitaannada la sheegay ee HTC Desire 12 Plus, oo ah nooc duug ah oo loo yaqaan 'Desire 12', ayaa ifka u soo baxay
Dhawr saacadood ka hor, dhowr faahfaahin iyo qaababka HTC Desire 12 Plus ayaa soo ifbaxay, nooc ka sii awood badan oo ah Desire 12 oo ku imaan doona shaashad 5.99-inji ah, SD450, 3GB oo RAM ah, iyo wax badan oo dheeri ah. Waanu kugu balaarinay!
Shaandheeyey qeexitaanka, qiimaha iyo naqshadeynta Huawei P20 Lite
Huawei P20 Lite: Tilmaamaha, qiimaha iyo naqshadeynta ayaa xaday. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ka raadi sumadda Shiinaha ee la soo bandhigi doono dhammaadka bishan.
OnePlus wuxuu ku biirayaa moodada caanka ah ee leh terminaalkeeda xigta, OnePlus 6
Soo saaraha ugu dambeeya ee u muuqda inuu nuqul ka samaynayo iPhone X waa OnePlus sida ku cad sawirradii ugu horreeyay ee laga sii daayay qaabkeeda soo socda.
Xiaomi Mi Mix 2S iyo Mi 7 waxay lahaan lahaayeen shaashad OLED oo 6.01-inch ah oo Samsung ah
Xiaomi Mi Mix 2S iyo Mi 7, sida ku cad wararkii ugu dambeeyay ee dhacayay, waxay la imaanayaan shaashad Samsung Galaxy 6.01 ah oo Samsung inch ah. Tan waxaa la sii daayay dhawaan, laakiin ma xaqiijin shirkadda Shiinaha. Waanu kugu balaarinay!
UHANS i8 dib u eegis
Falanqaynta UHANS i8, taleefan casri ah oo shaashaddiisu dhan tahay 5,7 inji, 4GB oo RAM ah, iyo kamarad laba geesood ah oo Sony ah oo aan kaa dhaafi doonin. Waxaan si buuxda u tijaabinay si aan u aragno wanaagiisa iyo qasaaraheeda. Mudan?
DOOGEE V: Calaamadaha cusub ee sumadda ee lagu soo bandhigay MWC 2018
DOOGEE V: Soo bandhigid heer sare ah oo ka socota MWC 2018. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan soo bandhigida taleefanka astaanta ee munaasabadda caanka ah.
ASUS Zenfone 5Z, Zenfone 5 iyo 5 Lite: Telefoonada ASUS waxaa lagu soo bandhigay MWC 2018
ASUS Zenfone 5Z, Zenfone 5 iyo 5 Lite: Qeexitaannada qiimaha ayaa bilaabaya. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefannada ay sumaddu ku soo bandhigtay MWC 2018.
Wiko Tommy 3, Lenny 5 iyo Jerry 3: Qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan saddexda taleefan ee hooseeya ka ogow astaanta Faransiiska.
Shirkadda Kuuriyaanka ah ee LG waxay ku soo bandhigtay laba terminaal cusub MWC dhamaadka suuqa, LG K10 iyo LG K10 Plus
Sony Ear Duo, waa sameecadaha dhagaha la 'ee cusub ee shirkadda Japan
Sony waxay ku soo bandhigtay MWC ballanqaadkeeda cusub ee dhagaha dhagaha ee 'True Wireless headphones', 'the Sony Ear Duo', sameecado dhegeysi oo noo oggolaanaya inaan marinno kaaliyaha xarunteenna, ama Siri ama Kaaliyaha Google.
Hoox K31: Mobilada ugu amniga badan shirkadaha waxaa lagu soo bandhigay MWC
Hoox K31: Moobilka ganacsiga ugu nabdoon ee lagu soo bandhigay MWC. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefankan ugu amniga badan ee horay loogu soo bandhigay munaasabadda caanka ah.
Soo ogow dusha cusub ee kala duwan ee ay Sony ku soo bandhigtay MWC, Sony Xperia XZ2 iyo nooc isla eg oo awood badan laakiin ka yar, Sony Xperia XZ2 Compact
Mid ka mid ah lama filaanka lama filaanka ah ee ka dhashey natiijada Mobile World Congress ee socotey tan iyo 25-kii Febraayo magaalada Barcelona, ​​Spain, ayaa lagu soo bandhigey LG V30S ThinQ, oo la cusbooneysiiyey V30 iyadoo ugu wanaagsan sirdoon macmal ah iyo dhowr horumarin oo aan faahfaahin doono.
UleFone T2 Pro iyo Ulefone X: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefannada cusub ee sumadda Shiinaha ay ku soo bandhigtay MWC 2018.
Sawir cusub oo ka mid ah Huawei P20 ayaa xaday waxaanan leenahay naqshad aad u wanaagsan
ZTE Temp Go: Noocyada casriga casriga cusub ee leh Android Go
ZTE Temp Go: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ee calaamadda ee ku shaqeyn doona Android Go.
ZTE Blade V9 durbaba waa rasmi, ogow qeexitaankiisa oo buuxa
ZTE Blade V9: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista. Ka ogow wax badan oo ku saabsan bartamaha-bartamaha cusub ee sumadda ee ku sharxaya nashqad aad u casri ah oo casri ah iyo kaamiro laba-jibbaar ah.
Soo ogow shanta taleefannada casriga ee Nokia ee lagu soo bandhigay MWC 2018
Nokia: Smarthpones oo lagu soo bandhigay MWC 2018. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefannada ay sumaddu ku soo bandhigtay dhacdada maanta ka dhacday magaalada Barcelona.
Huawei MateBook X Pro: Laptop-ka oo leh shaashad aan xayndaab lahayn
Huawei MateBook X Pro: Laptop-kii ugu horreeyay oo leh shaashad aan xaddidneyn. Ka ogow wax badan oo ku saabsan laptop-ka sumadda Shiinaha ee lagu soo bandhigay MWC 2018.
Huawei MediaPad M5: Jiilka afraad ee kiniiniyada Huawei
Huawei MediaPad M5: Tilmaamaha, qiimaha iyo soo bandhigida MWC 2018. Wax badan ka baro kiniinka cusub ee nooca Shiinaha ee lagu soo bandhigay MWC 2018.
Microsoft iyo Xiaomi waxay ku biirayaan xoog si ay u abuuraan daruur iyo qalab sirdoon farsamo iyo mashruucyo
Microsoft iyo Xiaomi waxay ka shaqeeyaan sirdoonka macmalka iyo qalabka daruuriga ah iyo mashaariicda. Waxbadan ka ogow heshiiska labada shirkadood ay dhawaan gaareen.
Alcatel wuxuu ku soo bandhigayaa taxanahiisa cusub 1, 3 iyo 5 MWC 2018
Alcatel wuxuu soo bandhigayaa taxanahiisa cusub ee 1, 3 iyo 5 ee MWC 2018. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan safafka cusub ee astaanta horay sida rasmiga ah loogu soo bandhigay.
Alcatel 1X: Noocyada taleefanka cusub ee leh Android Go
Alcatel 1X: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista. Ka ogow wax badan oo ku saabsan soosaarida taleefanka cusub ee dhamaadka-hoose ee la yimaada Android Go.
Qeexitaannada kala duwan ee Moto G6 waa la daadiyay mahadnaqa GeekBench
GeekBench wuxuu muujinayaa dhowr qeexitaan oo ku saabsan Moto G6, bartamaha soo socda ee shirkadda Mareykanka ee aan ka helno Android 8.0 Oreo oo ah nidaamka hawlgalka iyo kuwa kale. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato? Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta!
Maalmo kooban ayaa ka hartay Shirka Caalamiga ah ee Mobile-ka ee magaalada Barcelona, ​​oo ah mid ka mid ah dhacdooyinka teknolojiyada ugu weyn uguna muhiimsan adduunka, Evan Blass, shaandhada caanka ah, waxay leedahay dhowr faahfaahin oo cusub oo ku saabsan Sony Xperia XZ2 iyo XZ2 Compact. , Labada terminaal ee dhamaadka-sare ah ee lagu soo bandhigi doono carwadan Sony.
Hadda waxaad ka heli kartaa Sony Xperia XA2, XA2 Ultra iyo L2 Spain
Sony Xperia XA2, XA2 Ultra iyo L2, ayaa horeyba loogu heli karaa iibinta Spain. Labada hore iyada oo loo marayo Sony Store kaliya 429 iyo 329 euro siday u kala horreeyaan, iyo L2 loogu talagalay 229 euro iyada oo loo marayo Amazon iib ahaan. Hada hel iyaga!
Huawei MediaPad M5 10 Pro: Kiniiniga Huawei ee yimaada MWC 2018
Huawei MediaPad M5 10 Pro: Huawei Tablet ee MWC 2018. Raadi wax badan oo ku saabsan kiniinkan cusub ee ka imanaya astaanta Shiinaha ee imaan doonta MWC 2018.
Kuwani waa qeexitaannada Huawei FLA-AL10 iyo FLA-AL00 sida laga soo xigtay TENAA
Huawei, shirkadda Aasiya ee fadhigeedu yahay Shiinaha, waxay umuuqataa inay ilowday 16: 9 qaababka shaashadda, waana Huawei FLA-AL10 iyo FLA-AL00, oo ah laba aaladood oo faahfaahintooda lagu soo daadiyay TENAA, waxay sharad ku galeen qaanadaha 18: 9 saamiga dhinaca. Waxaan kuu sheegeynaa dhammaantood!
Tani waxay noqon kartaa naqshadda 'Xiaomi Mi A2'
Sifeeyay naqshadda suuragalka ah ee Xiaomi Mi A2. Raadi wax badan oo ku saabsan daadadkan kaas oo naqshadeynta cusub ee taleefanka nooca dhexe ee sumadda Shiinaha lagu yaqaan.
LG K8 iyo LG K10 2018: Xadka ugu hooseeya waxaa lagu cusbooneysiiyaa awood weyn
LG K8 iyo LG K10 2018: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefannada cusub ee dhammaadka-hoose ka sumadda Kuuriya.
Miyaad horeyba u ogayd qeexitaanka Meizu E3? TENAA iyaga ayaaba noo sheegaya
Maalmo ka hor uun, Meizu E3 wuxuu ka soo muuqday TENAA, jaangooyaha Shiinaha iyo caddeeyaha oo muujiyey astaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee qalabkan. Waan ku tusaynaa!
Maamuusta 9 Lite waa la cusbooneysiiyaa iyadoo wejiga la furayo
Sharafta 9 Lite waxaa lagu cusbooneysiiyay weji furan. Raadi wax badan oo ku saabsan astaamaha cusub ee ku soo dhacaya taleefanka cusub ee nooca Shiinaha.
Sharafta 7C loo malaynayo waxaa lagu sifeeyay mahadsanid TENAA waana kuwan qeexitaankiisa
Huawei Honor 7C oo muuqda ayaa hadda la sifeeyey iyadoo ay weheliso astaamaheeda iyo qeexitaankiisa taas oo ay ugu mahad celineyso TENAA, oo ah shahaadeeyaha Shiinaha ee ay soo mariyaan dhammaan taleefannada lagu iibinayo dalka. Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta!
Bisadda S61 ee sagxadda leh ayaa la sii daayay Ogow astaamaha iyo tilmaamaha farsamo!
Caterpillar ayaa hadda soo saartay taleefankeedii ugu dambeeyay, waana bisadda S61, oo dhaxlay S60 oo la sii daayay sanadkii hore. Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan sifooyinka iyo tilmaamaha farsamo! Baro taas!
Telefoonka Muhiimka ah wuxuu imaan karaa Yurub bartamaha sanadka
Wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in Telefoonka Muhiimka ah uu imaan karo Yurub bartamaha sanadkaan, waxyar un kahor furitaanka jiilka labaad ee qaabkan.
Huawei Enjoy 8 wuxuu helaa shahaadada TENAA waana kuwan qeexitaankiisa
Shirweynihii adduunka ee Mobile-ka ee Barcelona ayaa soo dhowaanaya, Huawei waxay la joogi doontaa dhowr qalab oo cusub oo lagu soo bandhigi doono dhacdadaas la sheegay, laakiin, sidaas oo ay tahay, shirkadda Aasiya waxay diiradda saareysaa boosteejooyinka kale ee aan gadaal ka arki doonno, sida Huawei Enjoy 8 , mobilada aan horay u ogaanay astaamihiisa.
Kuwani waxay noqon doonaan qeexitaannada HTC U12 Plus sida ku xusan daadinta
HTC U12 Plus waa terminaal-dhamaadka sare ah oo horeyba looga hadlay wax yar oo ku saabsan astaamaha iyo tilmaamaha uu ku imaan karo bartamaha sanadkan. Marka loo eego daadadkii ugu dambeeyay, oo dhammeystiran, wuxuu ku imaan lahaa Snapdragon 845, 6 / 8GB oo RAM ah, shaashad 6.1-inji ah, iyo dhowr kale.
Ciyaarta 'Moto G6 Play' waxay ku muujineysaa astaamaheeda halbeeg
Moto G6 Ciyaar: Tilmaamaha cusub ee ku soo dhacay bartilmaameedka. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee Motorola ee imanaya usbuuca soo socda MWC 2018.
Sony Xperia ZX2 iyo ZX2 Tilmaamaha Compact ayaa xaday
Faahfaahinta ugu horreysa ee Sony Xperia XZ2 iyo XZ2 Compact waa la sifeeyaa iyadoo ay weheliso sawir suuragal ah.
VP of Meizu wuxuu xaqiijiyay imaatinka Meizu X2 iyo waliba qaababka qaar iyo qiimaha aaladan, waxaan kuu sheegeynaa dhamaan faahfaahinta.
Mobilada ciyaaraha ee Xiaomi waxaa loo yaqaan Black Shark
Sawiradii ugu horreeyay ayaa hadda la sifeeyey sida taleefannada casriga ah ee ugu horreeya ay u noqon doonaan kuwa ugu badan ee ciyaaraya ee Xiaomi, terminal loogu yeeri doono Black Shark.
Waxyaabo dhowr ah oo muhiim ah oo ka mid ah HTC Desire 12 ayaa si qarsoodi ah u soo daadiyay sida ku cad sanduuqa ay ku qoran tahay
Dhawaan astaamaha iyo qeexitaanada HTC Desire 12 waa la soo daadiyay, terminal ku dhex yaali doona liiska shirkadda oo ah dhexdhexaad dhexdhexaad / hoose ah, in kasta oo aanu lahayn astaamo awood leh, wuxuu raadin doonaa god leh naqshad waxay lamid noqon kartaa HTC U12. Waan kuu balaarinay!
Soo dejiso waraaqaha sawirada ee Xiaomi Redmi Note 5
Haddii aad rabto inaad bedesho waraaqaha sawir-gacmeedkaaga casriga ah, qodobkan waxaan ku tusi doonnaa 33 sawir-gacmeedyo ka yimid Redmi Note 5 iyo Redmi Note 5 Pro.
Nokia 8 Pro: Dhamaadka dhamaadka oo leh shan kamaradood iyo Snapdragon 845
Nokia 8 Pro: Kuwa ugu sareeya oo leh shan kamaradood iyo Snapdragon 845. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee sumcadda suuqa ku soo dhacaya sannadkan.
Xiaomi ayaa toddobaadkan ka furi doonta dukaankeedii ugu horreeyay ee muuqaal ahaan laga helo magaalada Barcelona
Xiaomi ayaa toddobaadkan ka furi doonta dukaankeedii ugu horreeyay ee muuqaal ahaan laga helo magaalada Barcelona. Ka ogow wax badan oo ku saabsan furitaanka dukaanka sumcadda Shiinaha ee magaalada Barcelona kahor MWC 2018.
Shirweynihii adduunka ee wareega ee Barcelona ayaa soo dhowaanaya. Waa maxay warka wanaagsan ee Vernee uu noo hayo?
Shirweynihii adduunka ee mobilka ee Barcelona ayaa ku soo dhowaanaya, oo ay la socdaan, dhowr sheeko oo cusub oo aan ogaan doonno inta ay socoto. Kaasi waa kiiska Vernee, shirkadda Aasiyaanka ah oo noo diyaarisay dhowr sadar oo ay diiradda ku saari doonto aaladaha qayb kasta. Waan kuu balaarinay!
Bixinta degdegga ah ee Pixel iyo Pixel 2 waxay u baahan tahay heer-kulka ugu wanaagsan ee shaqeynaya
Xawaaraha degdegga ah ee Google Pixel 2 XL iyo Google Pixel 2 ayaa saameynaya marka xaaladaha cimiladu na siiyaan heerkul ka hooseeya 20 digrii.
Nubia NX606J waxaa lagu arki karaa AnTuTu oo leh Snapdragon 845 iyo 6GB RAM
Nubia NX606J ayaa dhawaan lagu daadiyay AnTuTu Benchmark oo leh processor Qualcomm Snapdragon 845, iyo 6GB oo RAM ah, marka laga reebo qeexitaanada kale ee ka dhigaya inay noqdaan tartame heer sare ah. Baro taas!
Xog cusub oo laga sii daayay Huawei P20 Plus
Xog cusub oo la helay oo ku saabsan Huawei P20 Plus. Ka hel wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee dhamaadka sare ee ka imanaya astaanta Shiinaha ee suuqa soo galaysa bisha Maarso.
Asus Z01RD waxaa lagu daadiyay Qualcomm SD845 iyo 6GB oo RAM ah. Ma noqon doonaa ZenFone 5 cusub?
Asus, shirkadda Aasiya, waxay rabtaa inay gasho liiska shirkadaha soo saara taleefannada ee doorta Qualcomm Snapdragon 845 oo ah processor-ka calankooda. Noocan oo kale ah wuxuu ku dhacaa Asus Z01RD, mobilka hadda lagu sifeeyey AnTuTu oo ay weheliso SoC iyo 6GB RAM, marka lagu daro faa'iidooyinka kale.
LG wuxuu soo bandhigi doonaa LG G7 bartamaha sanadka
Wararkii ugu dambeeyay ee laxiriira LG G7 waxay soo jeedinayaan in Terminalkan qaabkan uu arki karo iftiinka bartamaha sanadka, gaar ahaan bisha Juun dhacdo madax banaan.
Nokia 4 wuxuu horey uhelay shahaadada FCC
Nokia 4 ayaa horay u heshay shahaadada FCC. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee nooca dhexdhexaadka ah ee dhawaan suuqa soo geli doona.
LG V30 oo ah midab casaan ah ayaa laga heli karaa Spain laga bilaabo berri
LG V30 oo casaan ah ayaa laga heli karaa Spain laga bilaabo berri. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qaabkan cusub ee taleefanka sare ee casaanka.
Muuqaal la duubay oo muujinaya hawlgalka Xiaomi Mi Mix 2s
Fiidiyowgii ugu horreeyay ee ku shaqeeya Xiaomi Mi Mix 2s waa la sifeeyey, terminal noqon doona jiilka saddexaad ee Xiaomi Mi Mix
Sawirradii ugu horreeyay ee xaday Huawei P20 Lite
Waxaan ku tuseynaa sawirradii ugu horreeyay ee dhabta ah ee Huawei P20 Lite oo ay la socdaan faahfaahintiisa oo dhan
Ka joojinta Xiaomi Mi 6, iyo aragtiyaha ugu horreeya!
Daahfurka Xiaomi Mi 6 taas oo marka lagu daro furitaanka caadiga ah aan eegno marka hore qeybta hore ka hor inta aan si dhameystiran loo fiirin fiidiyowga waxa shaki la'aan noqon kara ikhtiyaar iibsasho weyn oo ku dhexjirta heerka sare ee Android.
Telefoonka Muhiimka ah wuxuu ku yimid midabbo cusub oo daabacaaddiisa xaddidan
Telefoonka Muhiimka ah wuxuu soo bandhigayaa daabicitaan kooban oo midabyo cusub ah. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan daabacaadda xaddidan ee taleefanka sumadda ee ku yimaada midabbada cusub ee suuqa.
Shaandheeyey qeexitaannada ugu horreeya ee Moto G6
Moto G6: Tilmaamaha iyo sawirada taleefanka ee xaday. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qeexitaannada ugu horreeya iyo sawirrada ka yimaada taleefanka cusub ee Motorola.
OnePlus wuxuu leeyahay dhaqaaq xun marka ay timaado xallinta Xiaomi
OnePlus wuxuu rabay inuu xoqdo Xiaomi ka dib markii lagu guuldareystay sahaminta ay sameysay shirkadda Aasiya si loo arko waxa doorbidista shaqsiyadeed ee boosteejooyinkeedu ahaayeen.
Nokia 7+: Sawirro qarsoodi ah oo laga helay Nokia telefoonkiisii ​​ugu horreeyay ee Android
Nokia 7+: wuxuu xaday magaca taleefanka ugu horreeya ee Android One. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee lagu soo bandhigi doono MWC 2018.
Hisense HLTE212T waxaa lagu arkay markii ugu horeysay TENAA
Hisense HLTE212T waxaa lagu soo bandhigay TENAA, oo ah jaangooyaha Shiinaha iyo caddeynta. Marka loo eego keydkeeda, qalabkani wuxuu la yimaadaa qeexitaanno iyo astaamo u qalma dhexdhexaad / hoose, sida 3GB RAM, 1.40GHz afar geesood ah SoC, iyo kuwo kale. Baro taas!
Asus X00RD waxaa lagu sifeeyay GeekBench, mobiil, suurtagal ah, oo wata Android Go
Shirkadda Aasiyaanka ah ee Asus, waxay umuuqataa inay leedahay terminaal ay lajirto Android 8.1 Oreo nooca ay kujirto ee Go, iyo dhowr qeexitaanno iyo astaamaha caadiga ah ee mobilada hoose, sida ku cad waxa ku daatay GeekBench. Soo ogow!
Xiaomi Redmi Xusuusin 5 iyo 5 Pro horeyba waa rasmi, ogow qeexitaankooda buuxa!
Xiaomi Redmi Xusuusin 5 iyo 5 Pro: Qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista. Raadi wax badan oo ku saabsan labada taleefan ee cusub ee Xiaomi ee maanta lagu soo bandhigay Hindiya.
AnTuTu wuxuu soo bandhigayaa Sony H8266, mobiil wata Qualcomm Snapdragon 845 SoC iyo 4GB RAM
Dhawaan AnTuTu, Sony H8266, oo ah terminal ay ka soo baxeen qaar ka mid ah qeexitaankiisa, sida ku cad waxa ay na tuseyso, wuxuu qeyb ka noqon doonaa darajada ugu sarreysa ee buugga weyn ee Aasiya. Oo ay la socdaan Snapdragon 845, 4GB RAM, iyo Android 8.0 Oreo, waa maxay ballan qaad.
Telefoonka Muhiimka ah wuxuu iibiyay 88.000 oo unug lix bilood gudahood
Telefoonka Muhiimka ah wuxuu kaliya maareeyay inuu iibiyo 88.000 oo unug sanadkii 2017. Raadi wax badan oo ku saabsan iibka hooseeya ee taleefanka Muhiimka ah sanadkii hore.
Xiaomi waxay ku shaqeysaa taleefan casri ah oo loogu talagalay ciyaaraha
Xiaomi waxay hadda ku shaqeysaa taleefan casri ah. Raadi wax badan oo ku saabsan qorshooyinka shirkadda ee ka shaqeynaya taleefannadeeda casriga ah ee ugu horreeya.
Sawirka ugu horreeya ee Huawei P20 waxaa lagu sifeeyay darajo iyo xuduud la'aan
Bil ka hor waqtiga la qorsheeyay in la soo bandhigo ee Huawei P20, sawir ayaa hadda soo ifbaxay halka loo maleynayo in lagu muujiyay sida calanka Huawei ee xiga uu noqon doono
Xiaomi Redmi Note 5 ayaa xaday ka hor intaan la soo bandhigin
Shaandheeyay sawirradii ugu horreeyay ee Xiaomi Redmi Note 5. Soo ogow naqshada taleefanka, kaas oo la sifeeyo kahor soo bandhigidiisa Febraayo 14.
Sony Xperia XZ2 Pro: Diiwaanka Qarran ee Sony kii ugu horreeyay oo leh shaashadda 18: 9
Sony Xperia XZ2 Pro: Calaamadeynta Sony-tii ugu horreysay oo leh shaashad 18: 9 ah. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee Sony ee sharad ku samayn doona naqshad cusub.
Sifeeyay naqshadda Motorola Moto E5 Play
Moto E5 Ciyaar: Wuxuu ka dillaacay naqshadda Motorola-dhamaadka-cusub. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ee dhamaadka-dhamaadka ee soo socda ee bisha Abriil.
Xiaomi Mi A1 oo midab casaan leh leh ayaa Spain yimid waqti xaddidan
Xiaomi Mi A1 oo ah midab casaan ah oo horeyba looga heli jiray Spain. Ogow wax badan oo ku saabsan nooca cas ee aaladda oo horeyba ugu jirtay dukaamada Spain
Faahfaahinta cusub ee xaday ee Xiaomi Mi Mix 2S waxay xaqiijineysaa inay ku imaaneyso Snapdragon 845 iyo 8GB RAM
Maalmo yar uun ka dib Shirweynaha Caalamiga ah ee Mobilka ee ka dhici doona magaalada Barcelona ee dalka Spain, ayaa Xiaomi Mi Mix 2S ay siisay wax ay ka hadlaan. Munaasabaddan, dhowaan, dhowr faahfaahin ayaa la soo dejiyey oo xaqiijinaya inuu ku imaan doono Snapdragon 845, 8GB RAM, iyo akhristaha sawirka faraha shaashadda hoosteeda.
Sawirradii ugu horreeyay iyo qaababka Asus Zenfone 5 Lite
Sawiradii ugu horreeyay iyo faahfaahinta Asus Zenfone 5 Lite ayaa ifka u soo baxay
Kuwani waxay noqon lahaayeen astaamaha Xiaomi Mi 7 sida ku cad daadashada
Dhawaan, faahfaahin dhowr ah oo ku saabsan qeexitaannada farsamada iyo astaamaha uu Xiaomi Mi 7 qaadi karo, terminaalka xiga ee shirkadda Aasiya oo arki doona iftiinka sanadkaan gudihiisa, laga yaabee inay tahay MWC oo lagu qabanayo Barcelona, ​​Spain, ayaa laga dusay.
Maamuuska 8 iyo 7X wuxuu heli lahaa Android 8.0 Oreo ... Oo waxay noqon laheyd xagaaga kahor!
Huawei Honor 8 iyo 7X, sida laga soo xigtay Honor France, waxay heli doontaa Android 8.0 Oreo oo hoos timaadda EMUI 8 kahor xagaaga oo durba soo dhowaanaya. Tani waa war aad ufiican maadama Honor India horey usheegtay wax kadhan ah. Waan kuu balaarinay!
Elephone waxay timid Spain iyadoo ay weheliso Elephone U iyo U Pro
Elephone-ka wuxuu ku dagaa dalka Spain iyadoo ay la socdaan Elephone U iyo U Pro. Ogow wax badan oo ku saabsan imaatinka sumadda Shiinaha iyo taleefannadooda cusub ee dhexdhexaadka ah.
Panasonic P100, oo ah taleefan hooseeya oo horeyba looga heli jiray Hindiya iyada oo loo marayo FlipKart
Panasonic ayaa hadda ka bilaabay P100 suuqa Hindiya iyada oo loo marayo dukaanka internetka ee FlipKart. Qalabkan dhamaadka-hoose waa la iibin karaa, wuxuuna ku yimaadaa laba bandhig: Mid leh 1GB oo RAM ah, iyo mid kale oo wata 2GB. Baro taas!
Archos Core 55S, 57S iyo 60S: 18: 9 bandhigyo ayaa soo galay dhamaadka-hoose
Archos Core 55S, 57S iyo 60S: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista. Ka ogow wax badan oo ku saabsan soo saarista seddexdan taleefan ee ka soo baxa astaanta Faransiiska.
Taleefannada casriga ah ee ugu sarreeya ee la bixiyo Maalinta Jacaylka
Taleefannada casriga ah ee ugu sarreeya ee la bixiyo Maalinta Jacaylka. Baro xulashadan casriga ugu fiican nooc kasta oo aad bixin karto maalinta Jacaylka ee sannadkan.
Dib u eegida vkworld S8
Dib u eegis dhameystiran oo ku saabsan vkworld S8, taleefannadan casriga ah ma ahan oo keliya mid kale oo Samsung Galaxy S8 ah. Miyuu ku jiri doonaa dhererka moobiilka Samsung? Waxaan kuu sheegeynaa astaamaha, qiimaha iyo helitaanka Terminal-kaan Shiinaha oo inbadan laga bixiyo.
Kaydso Ulefone Power 3S hadda GearBest, mobiil leh batteriga 6350mAh iyo aqoonsiga wajiga!
Shirkadda Shiinaha ee Ulefone, waxay diyaarisay Ulefone Power 3S, oo ah terminal dhammaadkeedu sarreeyo oo leh faa'iidooyin dhowr ah sida aqoonsiga wajiga, batteri aad u weyn oo gaaraya 6.350mAh, afar kaamiro, akhristaha faraha, iyo kuwo kale oo badan oo keliya $ 169.99 halkii markii hore laga siin lahaa $ asalka ah. 229.99.
La kulan Infinix Hot S3, terminal leh harraad caan ah
Infinix Hot S3 waxaa maanta laga bilaabay gudaha Hindiya astaamo iyo tilmaamo u qalma taleefannada casriga ee dhexdhexaadka ah. Tani waxaa horeyba loogu heli karaa laba nooc oo loo maro FlipKart qiimo Rs 8.999 iyo Rs 10.999. Baro taas!
Sidee loo joojiyaa addoonsiga taleefanka? Nomu S10 ayaa na siinaya jawaabta!
Maalin kasta, waxaan ku xirnaaneynaa taleefoonada, waxaana ka tagnaa saaxiibtinimo, tacabiiro, dhacdooyinka bulshada, iyo waxyaabo kale oo muhiimad weyn leh. Waxaas oo dhan waa sababta oo ah waxaan ku quusinaynaa adduunka tiknoolajiyada. Si loo rogo tan, Nomu S10 wuxuu la yimaadaa astaamaha ugu fiican. Baro taas!
Xperia XA2 iyo XA2 Ultra waxay galaan barnaamijka Sony Open Device
Xperia XA2 iyo XA2 Ultra waxay horey ugujireen barnaamijka Sony Open Device. Ogow wax intaa ka badan oo ku saabsan halka laga soo galo boosteejooyinka barnaamijkan.
Motorola waxay cusbooneysiisaa Moto Z, G Plus 4, iyo lix kale Android Oreo. Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta Android Oreo ee gaaraya lix taleefan oo nooca ah
LG waxay ka baxaysaa suuqa taleefannada Shiinaha
Shirkadda Kuuriyada Waqooyi ee LG ayaa xiri doonta xafiisyadeeda qeybta taleefanka ee dalka Shiinaha, iyadoo gebi ahaanba ka tagaysa waddanka, iyadoo si maldahan u sheegaysa in laga yaabo inaysan noqon dalkii ugu horreeyay ee ay shirkaddu joojiso joogitaankeeda.
Soo bandhigtay naqshadda Huawei P20 oo ay ugu mahadcelineyso daboolkeeda
Huawei P20: Waxaa lagu sifeeyay naqshadda qalabka daboolkiisa. Raadi wax badan oo ku saabsan naqshadeynta dhammaadka-dhamaadka sare ee sumadda Shiinaha, taas oo horeyba loo ogaa mahadsanid daboolkeeda.
Nokia 7 Plus waa la xaday: Ogow sawiradeeda iyo qeexitaankeeda
Nokia 7 Plus: Sawirada xaday iyo qeexitaannada. Waxbadan ka ogow taleefanka cusub ee Nokia ee lagu soo bandhigi doono MWC 2018.
Qeexitaannada iyo astaamaha Sharp Android One S3, bartamaha dhexe ee shirkadda Japan
Shirkadda Jaban ee Sharp, ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay una soo bandhigtay shirkadda 'Sharp Android One S3' ee dalka Japan qiimo jaban oo ku saabsan 32.400 yen, oo qiyaastii noqonaysa 239 euro. Midkani wuxuu ku yimaadaa Android 8.0 Oreo hoosta mashruuca Android One. Waan ku tusi doonaa!
Ka hel Sharafta 6X qiimo weyn LigthInTheBox
Huawei Honor 6X wuxuu ku jiraa dalab aan caadi aheyn oo aan la aqbali karin oo ku yaal dukaanka Aasiya ee LighInTheBox waqti xaddidan. Waad ku iibsan kartaa qiimo la heli karo oo ku saabsan $ 189.99, taas oo, euro ahaan, isku mid noqonayso ugu yaraan 152 euro. Ka faaideyso!
Razer wuxuu soo saaray nooc gaar ah Razer Phone oo leh masaska dahabka ah
Soo saaraha qalabka ciyaaraha ayaa soo saaray daabacaad gaar ah Razer Phone oo leh masaska dahabiga ah ee laga iibsan karo oo kaliya Hong Kong iyo Mareykanka.
Astaamaha Xiaomi Redmi Note 5 mar labaad ayaa la sifeeyaa
Waxaan haynaa sawirro cusub oo xaday ee Xiaomi Redmi Note 5, ogow faahfaahinta cusub ee taleefankan Xiaomi ee soo socda iyo sidoo kale taariikhda la soo bandhigayo
OnePlus wuxuu laba jibaarayaa faa iidadiisa hal sano gudaheed
OnePlus waxay ku guuleysatay inay laba jibaarto faa'iidooyinkeeda hal sano. Raadi wax badan oo ku saabsan natiijooyinka shirkadda soo martay daqiiqad aad u wanaagsan.
Sony waxay xaqiijineysaa in taleefannada casriga ah ee ugu sarreeya ay yeelan doonaan cusbooneysiin laba sano ah
Sony waxay wax ka bedeshay siyaasadeeda cusbooneysiinta ee casriga casriga ah, iyadoo hubineysa in kala duwanaanshahan uu yeelan doono laba sano oo cusbooneysiin hubaal ah.
Oppo A71 (2018) waxaa lagu sii daayay tikniyoolajiyadda aqoonsiga quruxda AI
Oppo wuxuu soo bandhigayaa A71 (2018), oo ah nooc la cusbooneysiiyay ee A71 oo la bilaabay sanadkii hore, taasina waxay la imaaneysaa ku dhowaad isla qaababka iyo qeexitaanka noocyadeeda hoose, in kasta oo ay la socoto processor ka fiican iyo tiknoolajiyada aqoonsiga quruxda AI. Baro taas!
OUKITEL U18: Clone iPhone X kii ugu horreeyay ee La Heli Karo Kahor-Amarka $ 159,99
OUKITEL U18: Hore u sii dalbow iPhone X clone $ 159,99. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka sumadda Shiinaha ee hadda la heli karo si loo keydiyo
Astaamaha, qeexitaanka iyo qiimaha xaday ee Alcatel 5, oo ah mid dhexdhexaad ah oo rajo leh
Alcatel 5 wuxuu soo saaraa dhowr buzz tan iyo markii lagu soo bandhigay Showga Macaamiisha ee Las Vegas oo dhacay dhowr toddobaad ka hor. Hadda, xogaha ugu dambeeyay waxay xaqiijinayaan dhowr astaamo iyo qeexitaanno aan horey u ogaanay. Waan kuu balaarinay!
Huawei Pay, oo ah aaladda lacag bixinta ee calaamadda ayaa dhowaan imaan doonta Yurub
Shirkadda Huawei Pay waxay isu diyaarineysaa inay Yurub si rasmi ah u gasho. Ka ogow wax badan oo ku saabsan imaatinka barta lacag bixinta ee sumadda Shiinaha.
Nokia 5 iyo 6 waxay bilaabayaan inay helaan Android 8.0
Labada Nokia 5 iyo Nokia 6ba waxay bilaabeen inay helaan casriyeyntii la wada sugayay ee ku saabsanayd Android Oreo 8.0, iyagoo fulinaya ballanqaadkii HMD iyo Nokia markii ay labada aalad u soo bandhigeen suuqa.
Xiaomi Mi A1 wuxuu sii wadaa dhibaatooyin kadib markii la cusbooneysiiyay Android Oreo
Dhibaatooyinka Xiaomi Mi A1 ee leh Android Oreo wali way joogaan. Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta iyo dhibaatooyinka badan ee isticmaaleyaasha ay la kulmayaan.
Xiaomi ayaa dhawaan ka furi doonta dukaan cusub dalka Spain
Xiaomi waxay dukaan cusub ka furatay Spain waxayna ku boodaysaa Talyaaniga. Ka ogow wax badan oo ku saabsan qorshayaasha astaanta ee ballaarinta Yurub.
Motorola inay soo bandhigto 4GB RAM Moto X6 gudaha Hindiya
Motorola waxay soo saari doontaa nooc ka xoog badan Moto X4 caan ku ah Hindiya Febraayo 6deeda. Qalabkani wuxuu la imaan doonaa 8.0GB oo RAM ah iyo Android XNUMX Oreo oo horay loogu sii rakibay warshada, inkasta oo ay wali yeelan doonto naqshad la mid ah labadeeda nooc ee kale oo leh RAM hoose. Waan kuu balaarinay!
Shaandheeyey sawirradii ugu horreeyey ee Meizu 15 Plus. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka nooca Shiinaha ah ee naqshaddiisa horay loogu soo bandhigay tilmaamahan.
Huawei wuxuu diyaarinayaa kan xiga ee 'MediaPad M5', oo ah kaniini u dhigmi lahaa bedelka MediaPad M3 oo lagu soo bandhigay IFA ee magaalada Berlin sanadkii hore. Waxaan kuu sheegeynaa wax walba oo ku saabsan waxaanan ku tusaynaa qaabkeeda!
Xiaomi waxay si rasmi ah ugu dhawaaqeysaa Mi Box 4 iyo 4c oo laga heli karo kaliya Shiinaha
Maanta Xiaomi waxay shaacisay labo sanduuq oo Smart TV ah, waxaan kuu sheegeynaa dhamaan faahfaahinta Mi Box 4 iyo 4c
Xiaomi waxay daabacdaa nooc cusub oo ah Redmi 5
Nooca cusub ee Xiaomi Redmi 5 ayaa la bilaabay. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan nooca qalabka leh RAM badan oo horey loogu soo saaray Shiinaha.
Huawei P20 wuxuu ku imaan doonaa midabadan suuqa
Wax ka baro midabada ay Huawei P20 ku dhufan doonto dukaamada. Dhamaadka-dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha ayaa suuqa soo galaya dhawaan, waxaan hore u ogaanay midabbada ay leeyihiin.
Nokia 7 Plus wuxuu ku tusayaa qaar ka mid ah qeexitaankiisa GeekBench
Nokia 7 Plus ayaa lagu sii daayay GeekBench oo muujinaya qaar ka mid ah astaamaha gudaha, sida processor Qualcomm Snapdragon 660 iyo Android Oreo. Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta!
Telefoonkii u dabaaldegi lahaa 15-kii sano ee Meizu wuxuu ku soo muuqday liis bixintii ugu horreysay ee xaday, ogaada xanta iyo faahfaahinta Meizu 15
Naqshadeynta Moto E5, oo ah bedelka Moto E4, ayaa lagu arki karaa fiidiyowga
Motorola Moto E5 waxaa lagu arki karaa fiidiyoow, taas oo ah, 3D bixinta ay bixiso OnLeaks, waxaan ku qanacsanahay naqshadda dhammaystiran ee terminaalkan oo loogu talagalay bartamaha shirkadda. Waan ku tusaynaa!
Xiaomi waxay horey u iibisay taleefanno ka badan kuwa Samsung ee Hindiya
Xiaomi waxay ka sarreysaa Samsung iibka Hindiya. Wax badan ka ogow tirooyinka iibka ee shirkadda Shiinaha ee ku taal waddanka Aasiya ee riday Samsung.
OUKITEL U18, taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah ee lagu dhiirrigeliyo iPhone X isla markaana la heli karo
Laga bilaabo Janaayo 29, waxaad awoodi doontaa inaad la wareegto taleefanka gacanta ee ugu horreeya ee Android oo ku saleysan iPhone X, OUKITEL U18, oo ah qalab sidoo kale bixiya waxyaabo intaa ka sii badan.
Xiaomi Mi MIX 2 oo cadaan ah oo leh 8 GB oo RAM ah ayaa yimid Spain
Daabacaadda gaarka ah ee Xiaomi Mi MIX 2 oo midab cad leh ayaa timid Spain. Waxbadan ka ogow noockan cusub ee taleefanka Xiaomi ee hadda yimid Spain.
Vernee X: Feedhka iyo Saamaynta Koowaad
Halkan waxaad kuheleysaa sanduuqa fekerka iyo aragtida koowaad ee Vernee X, oo ah terminal shaashad dhan oo leh batteri weyn oo 6200 Mah ah iyo qeexitaanno farsamo oo aad u xiiso badan.
Samsung Galaxy S9 ayaa ku daatay fiidiyow cusub oo dhab ah
Ka dusay muuqaal cusub oo dhab ah oo Samsung Galaxy S9 ah. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan fiidiyowgan laga soo daayay taleefanka astaanta Kuuriya ee shaashadda taleefanka lagu arkay.
Dhawaan, markii la soo bandhigayay ZTE Axon M ee suuqa Shiinaha, shirkadda Aasiya waxay ku dhawaaqday in beddelka Axon 7 uu noqon doono Axon 9, oo ah terminaal imaan doona sannadkan si loo soo nooleeyo guusha kan ka horreeyay. Waxaan kuu fidineynaa warka!
Bilaabashada Huawei P11 ayaa dib loo dhigi karaa si aysan ula tartamin Galaxy S9 iyo S9 +
Huawei P11 ma imaan karin inta lagu gudajiray MWC 2018 oo taa badalkeed wuxuu soo muuqday Abriil, ogow dhammaan faahfaahinta dib u dhaca lama filaanka ah
OUKITEL U18 waxaa loo heli doonaa iib ahaan kahor Janaayo 29
OUKITEL waxay ku dhawaaqday iibkii ugu horreeyay ee adduunka ee OUKITEL U18, mobilada gacanta ee Android oo leh naqshad la mid ah ta iPhone X ee xagga hore, aadna ugu eg tan Huawei Mate 10 Pro. Tani waxay ka bilaaban doontaa Janaayo 29 gacan ka geysashada dukaamada internetka ee kala duwan.
Sony waxay xireysaa adeegyadeeda goobta taleefanka "My Xperia"
My Xperia, adeegga tilifoonka tilifoonka Sony wuu xirmayaa. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan xiritaanka adeegga tilmaamee taleefanka sumadda.
Ku raaxayso qiimo dhimista illaa 20% taleefannada LEAGOO ee ku yaal Aliexpress
Ka faa'iideyso qiimo dhimista taleefannada LEAGOO ee ku yaal Aliexpress. Ka ogow wax badan oo ku saabsan qiimo-dhimista taleefannada shirkadda ee horay looga heli jiray dukaanka caanka ah.
LG G7 laguma soo bandhigi doono Mobile World Congress 2018
LG ma soo bandhigi doonto LG G7 ee Shirweynaha Caalamiga ah ee Mobile-ka 2018. Ka ogow wax badan oo ku saabsan go'aanka shirkadda ee sababi doona faallooyin badan.
Kuwani waa qeexitaannada LG X4 Plus, moobiil wata shahaado milatari
LG X4 Plus ayaa si rasmi ah loogu soo bandhigay Kuuriyada Koonfureed oo ay weheliso shahaado militari oo ay siisay Waaxda Difaaca ee Maraykanka taas oo ka dhigaysa mid u adkaysata xaaladaha adag. Laga soo bilaabo halkan Androidsis, waxaan soo bandhigeynaa dhammaan astaamaheeda iyo qeexitaankiisa.
Xiaomi Mi Max 3 ayaa lagu arkay daadinta
La kulan xogta ugu horeysa ee Xiaomi Mi Max 3 kadib daadinta. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan daadadan oo xogta ugu horreysa ee taleefanka laga helo.
Kuwani waa taleefannada 40 Xiaomi ee u cusbooneysiin doona MIUI 9
Telefoonada 40 Xiaomi ee cusbooneysiin doona MIUI 9. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan liiskan taleefannada taleefannada nooca ugu dhakhsaha badan ee ku raaxeysan doona MIUI 9.
Kusoo hel OnePlus 5T 6GB / 64GB kaliya € 422.99 halkii aad ka heli lahayd Ge 499 ee GearBest
OnePlus 5T wuxuu hoos ugu dhacay boqolkiiba 15 cajiib ah GearBest. Haddii aad rabto inaad hesho terminal-dhamaadka sare ee cajiibka ah, sida ugu dhakhsaha badan u samee sida ugu dhaqsaha badan maxaa yeelay waa uun waqti xaddidan! Waxaan ku siinaynaa faahfaahinta.